တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ကမ်းလှမ်းမှု USB Humidifier, မော်တော်ကား Humidifier, USB Air ကို Humidifier
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:usb Humidifier,ကားတစ်စီး Humidifier,usb Air ကို Humidifier,usb အိတ်ဆောင် Humidifier,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > USB မှတ် Humidifier
USB မှတ် Humidifier
USB မှတ် Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, usb Humidifier, ကားတစ်စီး Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, usb Air ကို Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
လုံခြုံမှုပထမ ဦး စွာအသေးစား USB Cool Mist Humidifier
အမေဇုံပစ်မှတ် Walmart တွင် Aroma Usb Humidifier ရောင်းချခြင်း
Portable လေအေးပေးစက် Aroma Diffuser Humidifier USB Mini Portable
အကောင်းဆုံး Usb Desktop Cool Mist Air Humidifier
အသေးစား Usb Port Personal Mist Air Humidifier
ခရီးသွားရန်အိတ်ဆောင် Usb Humidifier Purifier ညအလင်းရောင်
Mini ကို Usb Powered Cool Mist Ultrasonic Humidifier
အိပ်ခန်းစားပွဲအတွက် Mini Portable Cute Usb Humidifier
Mini Usb Humidifier မှ Auto Shut off Timer ချိန်ညှိခြင်း
ပစ်မှတ်ထားသော USB Car Evaporative Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
မရှိမဖြစ်ရေနံနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Mini ကို USB ကား Humidifier
Mini ကို USB အနံ့ Air ကို Humidifier ပန်းအိုး Air ကိုစင်ကြယ်စေ
USB နှင့်အတူသစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ 5V Mini ကို Humidifier
Mini ကို USB Humidifier ပြီးတော့ရနံ့ကုထုံပျံ့
5V 80ml Wood ကကောက်ပဲသီးနှံအိတ်ဆောင် Mini ကို USB Humidifier
ကားတစ်စီးခရီးသွား Air ကိုစင်ကြယ်စေ Air ကို Humidifier USB ပါဝါ
ခရီးသွားခြင်းအိတ်ဆောင်ကား USB Mini ကိုအနံ့ Humidifier
လုံခြုံမှုပထမ ဦး စွာအသေးစား USB Cool Mist Humidifier ဤသည် ultrasonic လျှပ်စစ်လေထုအခိုးအငွေ့ ultrasonic humidifier ထိန်းချုပ်ထားသော LED အလင်းအိမ်နှင့်အရောင်များနှင့်အတူ 100ml စွမ်းရည်ကွန်တိန်နာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအမွှေးမွှေးများနှင့်စိုထိုင်းဆပျံ့နှံ့ခြင်းအားဖြင့် aromatherapy အတွက်အသုံးပြုသည်။ Ultrasonic...
အိတ်ဆောင် USB Air ကို Humidifier ရနံ့ကုထုံမော်တော်ကား စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပါ & နည်းနည်းအနားယူ: အလုပ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်သင့်ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်တစ်ဦးသေဆုံးသူကြာပါသည်။ USB မှပျံ့အနေနဲ့သင့်ရဲ့ရုံးခန်းမှဝင်ရောက်ခွင့်, ကွန်ပြူတာလက်ပ်တော့, ပါဝါဘဏ်, ကားတစ်စီးရှိပါတယ်။ usb...
အမေဇုံပစ်မှတ် Walmart တွင် Aroma Usb Humidifier ရောင်းချခြင်း USB Diffuser တွင်ထူးခြားသော 3-in-1 ဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သော built-in အနံ့ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ အခိုးအငွေ့ဖန်တီးရန် ultrasonic လှိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤ ultrasonic ပျံ့နှံ့မှုသည်သတ်မှတ်ထားသောthroughoutရိယာတစ်လျှောက်အနံ့ကိုထိရောက်စွာပျံ့နှံ့စေသည်။...
Portable လေအေးပေးစက် Aroma Diffuser Humidifier USB Mini Portable အင်္ဂါရပ်များ 3-in-1 လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း - aromatherapy ပျံ့နှံ့မှု၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေသန့်သန့်ရှင်းရေး။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောလေထုစိုထိုင်းဆကိုပေးသည်။ ရေအဆင့်နိမ့်သည့်အခါအလိုအလျောက် shutdown function...
အကောင်းဆုံး Usb Desktop Cool Mist Air Humidifier သင်၏အိမ်တွင်လေပူစက်သုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ Mini humidifier ကိုအဓိကအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အိမ်ရှိခြောက်သွေ့သောလေများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းလေသည်ပြairနာများဖြစ်စေနိုင်သည် မျက်လုံးခြောက် လည်ချောင်းနာသည် နှာခေါင်းကျမ်းပိုဒ်ခြောက်သွေ့...
အသေးစား Usb Port Personal Mist Air Humidifier ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ရနံ့ကုထုံးပျံ့ အမှတ်တံဆိပ်: DITUO ပစ္စည်း: ABS + PP အရောင်: အလင်း / မှောင်မိုက်သစ်သားစပါးကို ရေတိုင်ကီစွမ်းရည်: 80ML အသုံးပြုပါဝါ: 5V --- 1A ပါဝါ: 5.5W Function: ရနံ့ကုထုံး၊ စိုထိုင်းဆ၊ ညအလင်းရောင် အနုမြူလက်နက်အချိန်:4နာရီ အင်္ဂါရပ်များ: 1. Anti-dry...
ခရီးသွားရန်အိတ်ဆောင် Usb Humidifier Purifier ညအလင်းရောင် DITUO မွှေးပျံ့နှံ့သော nebulizers နှင့်အတူ All- သဘာဝ All spa ကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းရာဌာနကိုဖန်တီးပါ။ သင်ရနံ့ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားချင်သောမည်သည့်နေရာအတွက်မဆို Aromatherapy ပျံ့နှံ့သည်။...
Mini ကို Usb Powered Cool Mist Ultrasonic Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြန့်ဖြူးသူတစ် ဦး သည်မည်မျှကူညီပေးသနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ဤကုန်ပစ္စည်း၏စျေးကွက်တစ်ခုလုံးအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဆိုပါကကုန်စည်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန်ခရီးရှည်မစခင်အခြေခံများကိုသိရန်လိုကောင်းလိုပေလိမ့်မည်။...
အိပ်ခန်းစားပွဲအတွက် Mini Portable Cute Usb Humidifier သစ်သားအစေ့ Aroma ပျံ့နှံ့စက်နှင့် Ultrasonic Humidifier လေသန့်ရှင်းစက်ဖြစ်သည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒီဇိုင်း၊ လှပသောပုံစံနှင့်ထူးခြားသောစတိုင်ဖြင့်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။ အမှီအခိုကင်းသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ၄...
Mini Usb Humidifier မှ Auto Shut off Timer ချိန်ညှိခြင်း USB Humidifier သည်အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ကားတစ်စီးနှင့်ခရီးသွားခြင်းတို့တွင်စိတ်သက်သာစေနိုင်သောကိုယ်ပိုင်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးသည်။ အသုံးပြုရန်ရေထည်ကိုသန့်စင်သောရေဖြင့်ဖြည့်ရန်၊ ရေအေးစက်ကို USB port သို့ချက်ချင်းသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပိတ်ရန်အခိုးအငွေ့ခလုတ်ကို...
ပစ်မှတ်ထားသော USB Car Evaporative Humidifier မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ [Oil Diffusers & Air Humidifier] - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက် ၅၀ မီလီမီတာရှိသောသစ်သားစုပ်စက်သည်အနည်းဆုံး ၄ နာရီအထိအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၇ LED နူးညံ့သောခံစားချက်အလင်းရောင်၊...
မရှိမဖြစ်ရေနံနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Mini ကို USB ကား Humidifier function ကိုရွေးချယ်ရေးလေကြောင်း humidifier များအတွက်မူထူးခြားတဲ့ One-touch နဲ့စာနယ်ဇင်းထိန်းချုပ်မှု Ultrasonic humidifier လုံခြုံပြီးတိတ်ဆိတ်အေးမြ ultrasonic လှိုင်းတံပိုးများကအစိုဓာတ်ကိုထုတ်ပေး Mini ကို humidifier...
Mini ကို USB အနံ့ Air ကို Humidifier ပန်းအိုး Air ကိုစင်ကြယ်စေ ဖော်ပြချက်: သင်မကြာခဏအိပ်နိုင်ခြင်း, စိတ်တိုခံစားရပါသလား? ပုံမှန်ယောဂသို့မဟုတ်ဂီတသငျသညျကိုယျခန်ဓာနှင့် mind.Don't စိုးရိမ်၏စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေရစေမပြုခဲ့ပါလျှင်, ဤပြဿနာများ၏အားလုံးသင် usb humidifier ကိုသုံးပါလျှင်,...
USB နှင့်အတူသစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ 5V Mini ကို Humidifier အပန်းဖြေမြင်ကွင်းဆိုပါစို့။ သင်သည်သင်၏ပခုံးပေါ်မှာဤလောကနှငျ့မအလေးချိန်နှင့်အတူအလင်းခံစားနေကြသည်။ သင်လက်ရှိ၌ရှိကြ၏တ၏အဖြစ်မှန်ရန်သင့်အားချချည်နှောင်မထားဘူးတဲ့နေရာ, တစ်ခုလုံးကမ္ဘာသစ်မှပယ်မျောခံရဖို့ပုံရသည်။...
Mini ကို USB Humidifier ပြီးတော့ရနံ့ကုထုံပျံ့ ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူကြောင်းရေမော်လီကျူးများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများဒီတော့သေးသေးလေးကိုမှန်မှန်နှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမှာ Ultrasonic ပျံ့။ ဤသည် usb humidifier သည့်အနုတ်လက္ခဏာအိုင်းယွန်းဖန်တီးနှငျ့သငျထိထိရောက်ရောက်ရနံ့ကုထုံခံစားရန်ခွင့်ပြုလေကြောင်း...
5V 80ml Wood ကကောက်ပဲသီးနှံအိတ်ဆောင် Mini ကို USB Humidifier သဘာဝ Wood ကကောက်ပဲသီးနှံမျှော်: Wood ကစပါးကိုပျံ့သင့်ရဲ့အလုပ်အာကာသသို့မဟုတ် home ကိုက်ညီဖို့ Zen-စတိုင်တစ်ခုထိပေးသည်။ ဒါဟာမဆိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုက်ညီသောအနုပညာanice ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Adjustments မြူခိုး Output နှင့်အတူကောင်းပြီ Size: Mini ကိုပျံ့ရေ 80ml...
ကားတစ်စီးခရီးသွား Air ကိုစင်ကြယ်စေ Air ကို Humidifier USB ပါဝါ Mini ကိုပျံ့အိမ်, ကားတစ်စီး, ရုံးအဘို့စုံလင်သည်။ Ultrasonic ပျံ့မွှေးအခိုးအငွေ့နှင့်အတူအခန်းကိုဖြည့်နိုင်ပြီးသင်အလိုရှိသကဲ့သို့သင်တို့လွတ်လပ်စွာခိုးအငွေ့ mode ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရနံ့ကုထုံပျံ့လည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအကြိုးခံစားသည်။...
ခရီးသွားခြင်းအိတ်ဆောင်ကား USB Mini ကိုအနံ့ Humidifier သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးကားတစ်စီးပျံ့တစ်ဦးရှာဖွေနေကြပါသည်လျှင်, Dituo 50ml သင်တို့အဘို့ရုံပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီအသေးအစွမ်းထက်နှင့်သေးသေးလေး usb humidifier ကြောင့်စီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်ရန်, ခရီးသွားလာ,...
တရုတ်နိုင်ငံ USB မှတ် Humidifier ပေးသွင်း
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ USB အိတ်ဆောင် Air ကို Humidifier
တိတ်ဆိတ်မှုထိုအကို Safe usb Humidifier: အသုံးချ Ultrasonic နည်းပညာ, သင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်သောစူပါတိတ်ဆိတ်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
usb Air ကို Humidifier 80ml ကွန်တိန်နာ Volume ကို:4နာရီ 25 ml / ဇမှုန်ရေမွှားမြန်နှုန်း။ အိပ်ခန်း, ရုံး, ကားတစ်စီး, ဟိုတယ်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပင်လေယာဉ်ပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
ပေါ့ပါးပြီးအိတ်ဆောင် usb အိတ်ဆောင် Humidifier: သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောလေထုကိုဖန်တီးရန်နွေးထွေးသောရောင်စုံညဥ့်အလင်းနှင့်အတူအိတ်ဆောင်ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းကခရီးသွားလာတဲ့အခါသင်ကအဆင်ပြေယူနိုငျသညျ, လက်တွေ့ကျတဲ့နဲ့လှပတဲ့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ကြော့နေအိမ်ပရိဘောဂဖြစ်ပါသည်။
ကားတစ်စီး Humidifier ကို USB အားသွင်း: USB ကြိုးမိုဘိုင်းပါဝါ, adapter သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကို USB interface ကိုစွမ်းအားဖြင့်နိုင်ပါသည်။
usb အိတ်ဆောင် Humidifier